Makurokota emuAfrica Ozeya muWashington Pamberi peMusangano weWB neIMF
African Ministerial Delegation in Washington
WASHINGTON — Nyika gumi nenhatu dzemu Africa dzakamirirwa nemakurukota ezvemari pamwe nevakuru vakuru mumapazi aya, dzaita musangano mukuru muWashington DC dzichipana mazano munyaya dzehupfumi.
Musangano wezuva rimwe chete uyu wanga uri wekuzeya nzira dzekusimudzira hupfumi hwenyika dzemuAfrica pamwe nezvingaitwe nevakuru vanoshanda mumapazi emari nehupfumi.
Musangano uyu wange uri pasi pendingidhira rinonzi "The Role of Governments In Spurring African Economic Take-Off", uye wakarongwa nesangano re Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa.
Zimbabwe yanga yakamirirwa pamusangano uyu negurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, avo vasvika neMuvhuro muWashington umo vachapinda zvakare mumisangano yepagore yeWorld Bank pamwe ne International Monetary Fund.
Vanowona nezvekufambiswa kwemashoko musangano uyu warongwa nesangano re Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa, iro rinoshanda nemakurukota ezvemari muAfrica, Muzvare Gladys Siwela, vanoti vari kufara nemafambiro aita musangano wavo.
Musangano uyu waparurwa naAmai Maria Kiwanuka, gurukota rezvemari muUganda.
Amai Kiwanuka vakorokotedza mamwe makorokota edzimwe nyika dzemu Africa vange vari pamusangano uyu nemabasa avari kuita munyika dzavo mukusimudzira nyaya dzehupfumi.
Vachitaurawo pamusangano uyu, nyanzvi munyaya dzemabhizinisi, Va Rohan Malik, vekambani yeErnst & Young mu India, vanoti hurumende dzemuAfrica dzinokwanisa kushandura mamiriro ezvinhu munyika dzavo kuburikidza nekutsvaga nzira dzekuwedzera mabasa.
VaMalik vanoti zvakakosha kuti makorokota ezvemari vadyidzane navana muzvinabhizinesi vemunyika dzavo kuitira kuti vapane mazano ekuwedzera huwandu hwemabasa kuitira kuti hupfumi hwenyika dzavo husimukire.
Hurukuro Na Muzvare Gladys Siwela